TRUMP: Madaxweynihii 3-aad ee Taariikhda Maraykanka lagu sameeyo (IMPEACHMENT) ama EEDA-XIL-KA-XAYUUBINTA…W/Q:-Xusein Deyr | Salaan Media
TRUMP: Madaxweynihii 3-aad ee Taariikhda Maraykanka lagu sameeyo (IMPEACHMENT) ama EEDA-XIL-KA-XAYUUBINTA…W/Q:-Xusein Deyr
January 18, 2020 | Published by: Hamse
(1.) Waa maxay EEDA-XIL-KA-XAYUUBINTU? (What is IMPEACHMENT?)
Dastuurka Maraykanku wuxuu si cad u qeexayaa in M/weynaha xilkiisa lagaga qaadi karo iyadoo loo marayo hab-raaca loo yaqaan impeachment; kadib marka uu ku kaco ama uu galo danbiyada ay ka mid yihii : Khiyaamo Qaran, Laaluush (uu bixiyo ama isagu uu qaato), Fal-dambiyeedyo kale oo culus ama uu sameeyo ficilo ka dhan akhlaaqda wanaagsan iyo anshaxa la isla ogol yahay.
M/weyne Trump, oo ka tirsan Xisbiga haatan talada haya ee Jamhuuriga, si adag ayuu uga soo horjeestay eedaymahaasi loo soo jeediyey wuxuuna sheegay in ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn.
(2.) Maxay yihiin EEDAHA ama DAMBIGA loo haysto M/weyne Trump? (What is he accused of doing wrong?):
Dacwada loo haysto M/weyne Trump waxay salka ku haysaa: Hadal xaga Telefoonka ah oo uu Trump 25/07/2019 la yeeshay M/weynaha Dalka Ukraine. Wada hadalkaa wuxuu Trump dhigiisa kale ka dalbaday inay is dhaafsadaan saaxiibtinimo ku dhisan ISKU-DANAYSI-SIYSASADEED oo laba dhinac ah:
(1) In Ukraine ay Maraykanka ka hesho caawimo milatari oo dhan 400 oo Milyan oo Dollar;
(2) In M/weye Trump uu M/weynaha Ukraine si rasmi ah ugu qaabili doono Aqalka Cad ee looga taliyo Maraykanka.
Labadan ballan-qaad ee uu Mr. Trump u sameeyey M/weynaha Dalka Ukraine, wuxuu ku xidhay shuruud, waxayna suurto gal yihiin oo keliya haddii M/weynaha Ukraine uu diyaar u yahay inuu maleego si cadna ugu dhawaaqo arrimo magac dil ku noqon kara M/weyne-ku-xigeenkii hore ee America Joe Biden oo u sharaxan Xisbiga Dimuqraadiga iyo weliba inankiisa Hunter Biden oo ka shaqayn jiray Dalka Ukraine xilligaa uu aabihii (Mr. Joe Biden) M/weyne-ku-xigeen u ahaa Barack Obama.
Aqalka Wakiilladu waxa kale oo ay Madaxweyne Trump ku eedeeyeen inuu Madaxweyne xukuma Dal kale oo dibada ah uu culays iyo cadaadisba ku saaray inuu sameeyo, abaabulo ama uu suurto geliyo Qorshe ah Fadeexad-Siyaasadeed oo ku wajahan ninka ay xaga siyaasada isku hayaan ee ay u badan tahay inuu M/weyne Trump kula tartamo doorashada Madaxweynaha ee ka dhici doonta Maraykanka 2020-ka.
(3.) Qaabkee M/weynaha Maraykanka loogu soo oogaa Eeda-XIL-KA-XAYUUBINTA?
Eeda ama dacwada Xil-ka-Xayuubinta M/weynuhu waxay martaa laba heer oo kala dambeeya oo ka dhaca labada Aqal ee Sharci Dejinta oo marka la isku daro loo yaqaano Congress, tiradooduna tahay 535 mudane(House: 435; Senate:100).
Waxa xusid mudan in waqtigan xaadirka ah labada Aqal ee Sharci Dejinta ee Maraykanka ay kala xukumaan labada Xisbi ee ku loolama talada Dalka Maraykanka. Xisbiga Jamhuuriga ee M/weyne Trump waxay xukumaan Aqalka Senate-ka (53 iyo 47). Halka Xisbiga Dimuqraadigu uu xukumo Aqalka Wakiilada (232 iyo 198)
Dacwada waxa bilaabaya Aqalka Wakiillada (House of Representatives) iyagoo cod-hal-dheeri ah (50+1) ku meel marinaya bilawga dacwada loo yaqaano IMPEACHMENT. Dabadeed gudi-hoosaadyada Caddaalada, Arrimaha Dibeda iyo Nabad-sugida ee Aqalka Wakiilladu waxay sameeyaan baadhitaano iyo dabagal qoto dheer oo ay ku baadhayaan arrimaha M/weynaha lagu eedaynayo. Waxay soo ururiyaan wax kasta oo xog ah, xaqiiqo ah iyo caddaymo la xidhiidha arrinta.
Baadhitaanada kadib, Aqalka Wakiilladu waxay isla meel dhigaan oo ay go’aan ka gaadhaan QODOBADA EEDA-XIL-KA-XAYUUBINTA (Articles of IMPEACHMENT). Dabadeedna cod ayaa Aqalka Wakiilada u qaadaan meel marinta Qodobada Eeda-Xil-ka-Xayuubinta; dabadeedna waxa loi gudbiyaa Aqalka Odayaasha (Senate-ka).
Haddaba, Qodobada Eedaynta ee haatan loo haysto M/weyne Trump waxay ku soo ururayaan labada qodob ee socda:
(A): Ku tagri-fal Awoodaha Xafiiska M/weynaha, isagoo M/weyne Trump Awoodii Dastuurku siiyey si qaldan u adeegsaday, una adeegsaday dano siyaasadeed iyo kuwo shakhsi oo isaga u gaar ah;
(B): In M/weyne Trump ku kacay La shaqayn la’aan iyo is-hortaag uu kaga hor yimid ama uu ku jaah-wareeriyey Baadhitaanadii ay wadeen Aqalka Wakiillada ee uu Dastuurku awooda u siiyey.
(4.) Hore ma u dhacday in M/weyne Maraykan ah lagu soo oogo Eed-Xil-ka-Xayuubin ah?
Haa, hore way u dhacday oo M/weyne Trump wuxuu Taariikhda ku galay Madaxweynihii saddexaad ee Maraykan ah ee lagu soo oogo Eeda-Xil-ka-Xayuubinta. Waxa ka horreeyay M/weyne Bill Clinton oo lagu qaaday impeachment sanadkii 1998 /1999. Qodobada Eeda-Xil-ka-Xayuubinta ee lagu soo oogay M/weyne Bill Clinton waxay ahaayeen:
(a): In uu Maxkamada horteeda ku dhaartay been (PERJURY /LYING UNDER OATH);
(b): Is hortaag iyo jaah-wareerin hab-sami-u-socodka Garsoorka (OBSTRUCTION OF JUSTICE),
Kadib markii uu ka been sheegay xidhiidh ka baxsan xayndaabka guurka oo uu la lahaa gabadh la yidhaa Monica Lewinsky, iyadana uu si weyn ugu dardaaray inay xidhiidhkooda ka been sheegto.
Arrintu si kastaba ha ahaatee, Dacwadii M/weyne BILL CLINTON markii ay u gudubtay Aqalka Sare ama Senate-ka, waa la gaadhi waayey codkii loo baahnaa in xilka lagaga qaado oo ahaa (2/3 out of 100)= 67 mudane.
Madaxweynihii ugu horreeyay Taariikhda Maraykanka ee lagu qaado Eeda-Xil-ka-Xayuubinta wuxuu ahaa ANDREW JOHNSON 1868, arrimaha uu ku mutaystay in lagu qaado impeachment waxa ugu mudnaa isagoo eryay Xoghayihii Arrimaha Dagaalka, kaasoo aanu Congress-ku raalli ka ahayn. Markii eedu ay gaadhay Aqalka Senate-ka, dirqi iyo tuxun ayuu kaga baxsaday in xilka laga qaado.
M/weynihii 37-aad ee M/kanka RICHARD NIXON oo galay arrintii caanka noqotay ee la baxday Ceebtii Water Gate, isagu intaan lagu soo oogin Eeda-Xil-ka-Xayuubinta ayuu is casilay sanadkii 1974-kii.
(5.): Qaabka ay uga shacayso Eeda-Xil-ka-Xayuubintu Aqalka Senate-ka:
Marka ay Eedu gaadho Aqalka Senate-ka, waxa bilaabma dhegaysiga Dacwada. Garsooraha Guud ee Maxkamada Sare (The US Chief Justice of Supreme Court) ayaa fadhiga gudoominaya ama daadihinaya, halka xubno ka tirsan Aqalka Wakiilladuna ay iyagu noqonayaan Xeer-Ilaaliyeyaal ama Dacwad-Oogayaal (Prosecutors), Madaxweynaha waxa difaacaya Looyaradiisa, halka 100-ka Xubnood ee uu ka kooban yahay Aqalka Senate-kuna ay dhamantood noqonayaan Xeer-beegti (Jury).
(6.): Gabagabada Eeda-Xil-ka-Xayuubinta:
Gunaanadka Dacwada,100-ka Xubnood ee uu ka kooban yahay Aqalka Senate-ka ayaa cod gacan taag ah waxay u codaynayaan in M/weynaha Xilka la qaado iyo in kale. Tiro ah 67 mudane ayaa loo baahan yahay inay u codeeyaan in Madaxweynaha Xilka laga qaado.
(7.): Ayaa bedelaya Trump hadii xilka laga xayuubiyo??
Waxa si ku meel gaadh ah u bedelaya Madaweyne-ku-xigeenka Mark Pence oo isaguna soo magacaabaya ku xigeenkiisa kaasoo u baahan ansixinta Congress-ka.
Haddaba, si kastaba ha ku timaadee, haddii uu M/weyne-ku-xigeenku uu diido inuu qabto xilka M/weynaha, Kursiga Madaxweynaha ee Xisbiga Jamhuurigu wuu dhaxal-wareegayaa waxana Xilka Madaxweynaha qabanaysa Afhayeenka Aqalka Wakiilada Nancy Pelosi oo ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga.
Falanqayn: Khilaafka Xisbiyada Mucaaridka Iyo Xukuumadda Somaliland
Deg Deg:- Agaasimaha Maxadka Heritage Oo Beeniyey Warar Laga Baahiyey Oo Somaliland La Xidhiidha
“Lacagtii yareed waxaa iga qaatay Isbitaaladda waxna uma qaban Wiilkayga ka xanunsan Kaadihaysta”
The rich should marry the poor to reduce poverty rate, says Indonesian minister
Qaybo Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyey Eid Hotel Oo Ku Yaala magalada hargeysa